Governemanta : Minisitra vaovao roa sy sekretera-panjakana vaovao roa -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta : Minisitra vaovao roa sy sekretera-panjakana vaovao roa
Mirona mankany amin’ny fanatsarana hatrany ny fitondrana sy ny fitantanana. Izay no ataon’ny Fitondram-panjakana, amin’izao fotoana izao.
Araka izany, omaly niroso tamin’ny fanovana ara-teknika ny mpikambana teo anivon’ny governemanta ny Fitondram-panjakana. Marihina fa tsy “remaniement” velively iny natao iny fa fanovana ara-teknika mitondra amin’ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fampandrosoana fotsiny ihany. Noho izany, nahazo minisitra vaovao roa sy sekretera-panjakana vaovao roa ny governemantan’i Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Voalohany, nihena sy nahena ny isan’ny minisitera ka natambatra ho minisitera tokana ny minisiteran’ny Angovo sy ny Akoran’Afo sy ny minisiteran’ny Rano sy ny Fanadiovana ary ny Fidiovana. Noho izany, lasa ho minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’Afo izany manomboka izao ka voatendry hitantana izany Rasoloelison Lantoniaina.
Manaraka izany, voatendry hitantana ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana kosa i Harry Laurent Rahajason.
Nisy fanovana ihany koa ny teo amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Ny minisitra lefitra eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny misahana ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana niova ho sekretera-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny misahana ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana izay tantanin’i Bary Emanuel Rafatrolaza.
Eo amin’ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena indray, voatendry hitantana izany kosa ny Général de Division Randriamahavalosoa Girard.
Ireo no mpikambana vaovao eo anivon’ny governemantan’i Solonandrasana Mahafaly Olivier.